Gịnị ka Jizọs kụziri banyere ịsụ ngọngọ na ịgbaghara mmehie?
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 29, 2020 Ọgọstụ 29, 2020
Ebe ọ bụ na achọghị m ịkpọte di m, m gara were ụra dinara ụra n’ọchịchịrị. Amaghị m na poodle ọkọlọtọ anyị dị kilogram 84 afụkọla na rọgị dị n’akụkụ àkwà m. Akwụ m ụkwụ wee see n'ala - ike. Echeghị m na Max kpebiri ịhapụ m mgbe ọ wakporo kapeeti. Ma ọementụ ya mere ka m nwee ụfụ na ikpere gbagọrọ agbagọ.
Tụleela na omume akpachapụghị anya anyị nwere ike ime ka ndị mmadụ sụọ ngọngọ n'okwukwe ha? Jizọs sịrị, “Ihe ịsụ ngọngọ ga-abịa, ma ahụhụ ga-adịrị onye ha si n’aka ya bịa! Ọ ga-akara ya mma ma ọ bụrụ na a kwụba nkume igwe nri n’olu ya wee tụba ya n’ime oké osimiri, karịa ịsụ ngọngọ otu n’ime ndị a dị nta ”(Luk 17: 1-2 NASB).
Kedu ihe bụ ihe mgbochi?
Blue Letter Bible na-akowa ihe mgbochi dị ka "mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla nke (ọnyà) sitere na njehie ma ọ bụ mmehie". Anyị nwere ike ọ gaghị ezube ime ka mmadụ sụọ ngọngọ na okwukwe ha, mana omume anyị, ma ọ bụ enweghị ya, nwere ike iduga ndị ọzọ imehie ma ọ bụ imehie.
Na Galeshia, Pọl gakwuuru Pita onyeozi maka ime ka ndị kwere ekwe sụọ ngọngọ. Ihu abụọ ya duhiekwara Banabas kwesịrị ntụkwasị obi.
“Ke ini Cephas ekedide Antioch, mma nsua enye ke iso, koro ẹma ẹbiom enye ikpe. Maka na tupu ụfọdụ mmadụ abịakwute James, ya na ndị na-ekpere arụsị na-erikọ nri. Ma mb theye ha biara, Ọ malitere isi n'etiti ndi mba ọzọ bia; n'ihi na Ọ nātu egwu ndi n thebì úgwù. Ndị Juu ndị ọzọ sonyeere ya n’omume ihu abụọ ya, nke mere ka e jikwa ihu abụọ ha rafuo Banabas ”(Ndị Galeshia 2: 11-13).
Ukem nte Peter, editịmede esịt ndidu eti uwem m̀m not nditre ndise idem nnyịn ekeme ndinam nnyịn ibiat mbuọtidem nnyịn. Anyị nwere ike iche na omume anyị enweghị isi. Ma omume anyị nwere mmetụta n’ebe ndị ọzọ nọ na n’ebe anyị onwe anyị nọ.
Taa, echiche na ihe omume dị iche iche na-eju anyị afọ, ọtụtụ n'ime ha na-emegidekwa nkuzi nke Akwụkwọ Nsọ. Nrụgide ibi ndụ ka ọdịbendị ụwa nke megidere Kraịst siri ike.
Mgbe ụfọdụ m na-ahụ onye na-alụ ọgụ maka ihe ziri ezi n'ihu ọha, kama ime ihe kwekọrọ n'uche ọtụtụ mmadụ, ana m eche banyere Shedrach, Mishach na Abednego, ụmụ okorobịa atọ ndị guzo ọtọ mgbe onye ọ bụla ọzọ gburu ikpere n'ala n'ihu arụsị ọla edo (Daniel 3). Nguzogide ha mere ka a tụba ha n'oké ọkụ.
Ọ na-efu anyị iguzogide ọdịbendị na ịgbachitere okwukwe anyị. Ma Jisos dọrọ aka na nti na inwe ihe ngaghari n’eduba ndi na-eto eto ndi kwere ekwe na-efu ihe ka ukwuu. Jizọs sịrị, "Ọ ga - aka mma ... ka a tụba gị n'oké osimiri ka ejiri nkume igwe nri kee gị n'olu karịa ime ka otu n'ime ndị a dị ntakịrị sụọ ngọngọ" (Luk 17: 2).
N'ime oku ahụ, Shadrac, Meshach na Abednego zutere Kraist tupu amụọ ya. Nchebe ha n'ụzọ ọrụ ebube dọtara uche nke onye na-ekpere arụsị. Ọ dịghị otu ntutu gbara ọkụ! Obi ike ha na-agbakwa anyị ume taa. Jizọs na-akwụ ndị ha na ya ụgwọ, ndụ a na ebighi ebi.
Adala mba na nmehie
Mgbe Jizọs gwachara ndị na-eso ụzọ ya ka ha lezie onwe ha anya, ọ gwara ha banyere imeso ndị mejọrọ ihe. Ndi enye ama okpụhọ ekikere? Echeghị m otu ahụ.
“Ya mere kpachara anya. Ọ bụrụ na nwanne gị nwoke ma ọ bụ nwanne gị nwanyị mehiere megide gị, kọchaa ha ”(Luk 17: 3).
Mgbe onye kwere ekwe ibe anyị mejọrọ anyị, Jizọs anaghị ekwu na ileghara ya anya. O kwuru na ọ na-abara ha mba. Gịnị mere o ji kwuo otú ahụ? Ekwenyere m na ọ chọrọ ichebe anyị pụọ na iwe na itinye aka na mmehie ha. Nke a na-enyekwa nwanna ahụ nwoke ma ọ bụ nwanyị ahụ ohere ichegharị. Ọ bụrụ na ha na-emejọ anyị, ikekwe ha na-emejọkwa ndị ọzọ. Lamta ụta nke mmehie na-echebe ha abụọ. Anyị achọghị ịhapụ omume mmehie.
Gbaghara ha - na ugboro ugboro
“Ọ bụrụkwa na ha echegharịa, gbaghara ha. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha emehie gị ugboro asaa n’otu ụbọchị wee bịakwute gị ugboro asaa na-asị na “echegharịrị m,” ị ga-agbaghara ha ”(Luk 17: 3-4).
Nọmba asaa na-anọchikarị anya ihe zuru ezu. Ọ pụtara na anyị ga na-agbaghara, n'agbanyeghị ugboro ole ha mejọrọ ihe ha mejọrọ (Matiu 18: 21-22).
Ọ bụrụ na mmadụ abịakwute m ugboro asaa n’ụbọchị ma sị m, “echegharịala m,” agaghị m atụkwasị ha obi. Ozi ọma ahụ bụ na Jizọs asịghị ịtụkwasị ha obi. Ọ na-ekwu ka ha gbaghara ha.
Forgbaghara pụtara "ịhapụ, ịhapụ". Ọ pụtakwara "ịkagbu ụgwọ". Na Matiu 18: 23-35, Jizọs na-atụ ilu nke eze gbaghaara nnukwu ụgwọ nke onye na-ejere ya ozi ji ya. Ohu ahụ a gbaghaara wee gaa nara ohu ibe ya obere ụgwọ. Mgbe nwoke ahụ na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ, onye ji ụgwọ agbaghara ya tụbara onye ọrụ ibe ya n'ụlọ mkpọrọ.
Mgbe eze ya gbaghaara gị nke ukwuu, ị ga-atụ anya na nwoke a ga-anụ ọkụ n’obi ịgbaghara ndị ji ya obere ụgwọ. Ngbaghara ya juru ndị niile hụrụ ya anya.
N'ezie, eze na-anọchi anya Jizọs, Eze nke ndị eze. Anyị bụ ndị odibo ahụ agbagharala ọtụtụ ihe. Anaghị agbaghara mmehie dịkarịrị ala mgbe a natachara amara dị ukwuu - ka emechara, mmehie anyị kpọgidere Ọkpara Chineke n'obe - bụ njọ na ụjọ.
Mgbe eze nụrụ na nwoke a agbagharaghị, o nyefere ya ka a taa ya ahụhụ. Onye ọ bụla bu iwe n’obi n’obi ya maara ndị ahụ na-ata ahụhụ. Mgbe ọ bụla ị chetara onye ahụ ma ọ bụ ụzọ ha si mehie, ị na-ata ahụhụ.
Ọ bụrụ na anyị ajụ ịgbaghara ndị mejọrọ anyị, anyị ga-asụ ngọngọ na mmejọ ha ma ndị ọzọ dakwasị anyị. Mgbaghara na-echebe obi anyị pụọ na obi ilu. Ndị Hibru 12:15 kwuru na obi ilu nwere ike imerụ ọtụtụ. Mgbe ndị kwere ekwe na-eto eto hụrụ anyị ka anyị bu iwe mgbe Chineke gbaghaara anyị, anyị na-abụ ihe mgbochi nwere ike iduga ha imehie.
Mee ka okwukwe anyị dịkwuo ukwuu
Ndị na-eso ụzọ ahụ zaghachiri n'ụzọ yiri nke gị na mụ: "Mee ka okwukwe anyị dịkwuo elu!" (Luk 17: 5).
Oleedị okwukwe na-ewe ịgbaghara onye mejọrọ ya ugboro ugboro? Ọ bụghị dị ka i nwere ike iche. Jesus ọnọ mbụk kiet man owụt ke edifen nnọ ọkọn̄ọ ke mbuọtidem nnyịn, edi ọkọn̄ọ ke mbuọtidem nnyịn.
"Ọ zara, sị," Ọ bụrụ na ị nwere okwukwe dịka obere mkpụrụ mọstad, ị nwere ike ịgwa osisi mulberry a, 'Wụhọdepụ gị ma kụọ n'oké osimiri,' ọ ga-erubere gị isi "(Luk 17: 6).
Ikekwe, ihe ọ na-ekwu bụ na mkpụrụ osisi mọstad nwere ike iwepụ osisi ilu. Ọ gara n'ihu igosipụta ọdịiche dị n'etiti ịme ihe n'ihi na anyị chọrọ ma mee ya n'ihi na Jizọs gwara anyị.
Ma asi na otù onye n'etiti unu nwere orù nke nālu ọlu ubi ma ọ bu nke nāzù ya. Ọ̀ ga-agwa ohu ahụ mgbe o si n'ọhịa lọta, “Bịa nọdụ ala iri ihe”? Kama, ọ gaghị asị: 'Kwadebere m nri abalị, kwadebenụ onwe m ma chere m mgbe m ga-eri ihe na andụọ ihe ọ drinkụ ;ụ; nke i rie, andu kwa '? Ọ ga-ekele ohu ahụ maka ime ihe a gwara ya mee? Ya mere, gị onwe gị kwa, imezu ihe niile a gwara gị mee, sị: “Anyị bụ ndị ohu na-erughị eru; anyị arụzuola ọrụ anyị '”(Luk 17: 6-10).
Ohu na-arụ ọrụ ya, ọ bụghị n'ihi na ọ masịrị ya, kama n'ihi na ọ bụ ọrụ ya. Ọbụna mgbe ohu gwụchara ike gwụ ya ma agụụ gụchaa ya n’ọhịa, ọ na-akwadebe nri abalị nke nna ya ukwu tupu nke ya.
Mgbe Jizọs gwara anyị ka anyị gbaghara, ọ bụghị n’ihi na ọ dị mma ma ọ bụ n’ihi na anyị chọrọ. Anyị na-agbaghara n’ihi na ọ bụ nna anyị ukwu na anyị bụ ndị ohu ya. Anyị na-eme nke a iji mee Nna anyị ukwu obi ụtọ.
Mgbaghara bụ ọrụ nke ọrụ. Anyị anaghị echere okwukwe ọzọ iji rube isi. Anyị na-ahọrọ irube isi ma Ọ na-enye anyị ume ka anyị hapụ ihe ọjọọ ndị anyị tara ahụhụ ya.
E nwee ọnwụnwa, anyị ga-echeta ịdọ aka ná ntị Jizọs ma lezie anya. Jizọs kwuru na ihe mgbochi ga-abịa n’ụwa. Anyị kwesịrị ịkpachara anya ka anyị ghara ịdị.
Nke gara aga Post Gara aga post:Chalice gbara ndi otu ISIS agha gosiputa na ulo uka Spanish
Next Post → Post ozo:Ludovica Nasti, Lila sitere na "Enyi mara oke": oria leukemia, okwukwe na njem njem na Medjugorje